Sei munhu kufanotaura maitiro mwero mumwe cryptocurrency tichitarisa uwandu mirairo akaisa? - Blockchain News
Chii hunhu muitiro kutenga kana kutengesa munhu cryptocurrency ane paIndaneti Exchange?
Ngatitii uri kuda kutenga chimwe Bitcoin nokuda $9,500. Zvino unofanira kuzivisa chido ichi kumusika uye zvinogona vatengesi yakabudisa bhuku rainzi ndarayira. Vanowatengesa kuonekwa saizvozvo nokuzivisa chido chavo kuti kutengesa Bitcoin paneimwewo mutengo. Kana zvido vanotengesa uwirirane nezvaanogona ari vatengi, kuti kutengeserana iri kwaita akagumisa. An siyana asati apedza kuraira yakanyorwa chii chinozivikanwa seBhuku murayiro.
Semutemo, pamusoro exchanges, bhuku kuti anoratidzwa muchimiro tafura, apo mafomu ose vatengesi zvinoratidzwa mu tsvuku, uye vatengi’ zvikumbiro vari girini. The calculators petafura kuratidza ravakanga kuda kutengesa kana kutenga uwandu mari uye mutengo. A kupararira achiumbwa panguva panosangana matafura izvi, kana musiyano iri mari zvitengeswa uye kudiwa. Rezasi kupararira, zvikuru mvura-mvura yacho crypto twa.
In pachati pamusoro, ari convergence kuti muganhu kutenga nokutengesa zvirevo chinomiririrwa masvingo kuti nguva nenguva batanidza. Pfungwa maererano ari manyoro uye tsvuku masvingo ndiyo pfungwa nhamba kuitika pamusoro cryptocurrency.
Bhuku kuti rine zvirevo muganhu chete, sezvo musika zvirevo (akaita pamusika mutengo) vari akaziva pakarepo, uye hazvina njrere kuratidza navo mubhuku kuti.
The kuongorora bhuku kurongeka iri kutungamirira chokukomborerwa musika mamiriro, sezvo anobvumira munhu achatanda kuchinja vasati zvichaitika. kana, semuyenzaniso, tinoona guru kuunganidza vachiriita kuti Implementation pa rokumusoro mutengo muganhu, tinogona kufungidzira kuti paakangoridza musika kunosvika muganhu uyu, kuchava kudzikira kushatiriswa vakawanda rokutengesa.
Kuenzana maodha vatambi huru vanoitirwawo zvakakosha kuita wokutengesera zvisarudzo, sezvo vari kuoneka mubhuku kuti nguva dzose uye anogona yekudyidzana achinakurira kunangiswa mauto. Orders dzichitaridzika mubhuku kuti vari pedyo chaizvo kumusika husipo. Kana pamusika kunoita imwe divi kana mumwe, vari kudhonzwa kumusika mutengo, kugadzirisa kufamba izvi. Panguva apo mutengo anosvika padanho kurwisa, pusa mirairo (vanobatisisa chete padanho) pedyo mumwe nomumwe ukoshi, vari wakaiswa mubhuku kuti.
Mwero mumwe cryptocurrency
Japan kuona 6 new crypto exch...
Chivabvu 21, 2018 pa 6:41 PM
Chivabvu 22, 2018 pa 5:44 PM
Chivabvu 23, 2018 pa 10:45 PM
Chivabvu 25, 2018 pa 8:56 PM
Chivabvu 29, 2018 pa 2:31 AM
Chikumi 8, 2018 pa 2:36 PM
Chikumi 10, 2018 pa 9:09 AM
Chikumi 13, 2018 pa 8:25 AM
Chikunguru 21, 2018 pa 10:39 AM